दशैँ सन्दर्भ : कस्तो मासु खाने, कस्ता विरामीले के गर्ने ? दशैँ सन्दर्भ : कस्तो मासु खाने, कस्ता विरामीले के गर्ने ? दशैँ सन्दर्भ : कस्तो मासु खाने, कस्ता विरामीले के गर्ने ?
२०७६ असार ६ शुक्रबार, ०५:२१
दशैँ सन्दर्भ : कस्तो मासु खाने, कस्ता विरामीले के गर्ने ?
२०७५ आश्विन २६ गते प्रकाशित, l २०:२३
असोज २६, काठमाण्डौ । दसैंमा सबैको भान्छामा मिठा मिठा परिकार पाक्छन । ती परिकार मध्ये प्रमुख मानिन्छ मासु । चाडपर्वको बेला मानिसहरुले बढी मात्रामा मासु खाने भएकाले निरोगी मानिस समेत रोगी हुने खतरा हुन्छ ।